विराटको ब्याट नचल्नुमा अनुश्काकाे दाेष ! :: Press Chautari ::
विश्वकप क्रिकेटमा भारतको पराजयलाई लिएर सबैभन्दा ठूलो आलोचना नायिका अनुश्का शर्माको भएको छ । भारतीय क्रिेकेट टिमका उपकप्तान विराट कोहलीकी यी ताती नायिकाकै कारणले विराटको ब्याट नचलेको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।
सेमिफाइनलसम्म राम्रैसँग ब्याट चलेका विराटको ब्याट फाइनलमा एकाएक रोक्कियो । १३ बलको सामना गरेका विराट १ रन बनाउँदै क्रिज छोड्न पुगे । उनकै ब्याट नचलेर भारतीय टिमको पराजय भएको आरोप लगाउँदै उनलाई टिमका कमजोर कडी बनाइएको छ ।
विराटलाई समर्थन गर्न सिड्नी क्रिेकेट मैदान पुगेकी अनुश्कालाई खेलको शुरुदेखि नै क्यामेराले बाराम्बार जुम इन गरिरहेको थियो । उनको उपस्थितिले नै विराटको ध्यान बलतिर नगएर आफ्नी ताती प्रेमिकातिर गएको आरोप भारतीय क्रिकेट समर्थकहरुले लगाएका छन् ।
विराट १ रनमा आउट हुँदा स्तव्ध देखिएकी अनुश्काले आफू भारतीय टिमको हौसला बढाउन सिड्नी पुगेको बताएकी छिन् । उनले आफ्नो आलोचनाको बचाव गर्दै भनेकी छिन्, भारतको पराजय हुँदा अरु भारतीय जतिकै म पनि दुःखी छु । मेरो आलोचना हुनु यसकारणले पनि जायज होला कि म विराटलाई माया गर्छु । दुर्भाग्य हामी सबैको उनी यसपटक रन बनाउन असफल भए । यसमा मलाई दोषी बनाउँदा ममाथि थप पीडा हुन्छ ।
अनुश्काको यो बचावपछि भारतीय आलोचकहरु केही मत्थर देखिएका छन् । उनको समर्थनमा देखिएको झिनो मतमा वृद्धि भएको छ । एक समर्थकले लेखेका छन्, विराटको ब्याट नचल्नुमा अनुश्काको के दोष ? उनले त त्यतिबेला विराटको ब्याट समाती दिएकी थिइनन् क्या रे ?
विहिवार, २०७१ चैत्र १२ गते १८:५३ / Thursday, Mar 26, 2015 6:53 pm